Baker-Olimpico Mini silikoon Dabbing Mat - Shiinaha Baker-Olimpico Mini silikoon Dabbing Mat qeybiye,-SHQD Factory
miisaanka: 0.32 oz / 9.2g (+/- 0.5g)
Sidee Mat Dabbing u shaqeeyo!
Marka aad ku dari shancosbitaal si uu dhidib Dab kulul, ka hadhay a dhegdheg ama waxy u dareerin laga yaabaa in off dhamaadka. Haddii hadhay this helo on dusha kasta — tusaale ahaan, miiska alwaax ah — waxay noqon kartaa adag si loo soo saaro.
dermaha Dab joojiyaan wax kasta oo, saliidda, ama harta kale Dab-la xiriira ka qariyaan dusha ka hooseeya aad Riigga Dab. dermaha Dab qaarkood waxaa jilicsan si ay u bixiyaan ilaalinta dheeraad ah riigga Dab ah; waa riigga Dab ku filaan ah ku dhici badan, derin Dab jilicsan caawin karaa kahortagga dillaacin.
Daryeelka iyo Isticmaalka:
1.Ha isticmaalin broiler ama olol furan.
2.Heerkulka lama filaan ah waa in aanay noqon in ka badan 250 Centigrade marka aad u isticmaasho.
3.Dhaq diiran, biyo saabuun leh oo qalalan maro jilicsan.
4.Don \_ 't saamayn xoog ama la xagtay alaabtii fiiqan
5.Don \_ 't u isticmaali aan waxba marka kulaylinta ee microwave